BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/30/20090အကြံပြုခြင်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်မှသူငယ်ချင်းဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက် သည် အိမ်ရှင်နှင့်တွဲရက် ဓါတ်ပုံဆိုင်လေးငှားဖွင့်ထားပြီးတပိုင်တနိုင်ဓါတ်ပုံဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထား
ရာအီးဘီစီရုံးမှ အိမ်ရှင်ထံလစဉ်မီတာစာရွက်ရောက်မလာသဖြင့်ရုံးသို့လိုက်လံမေးမြန်းရာ လုပ်ငန်းမီတာဖြစ်သွားကြောင်း ။ အီးဘီစီရုံးမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ကွမ်းယာဆိုင်ဖွင့်ထားသူတောင်မီးတစ်လုံးထွန်းလျှင်လုပ်ငန်းမီတာအဖြစ် မီတာဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း.သိရှိရပါသည်.သူငယ်ချင်းမှာ အိမ်ရှင်သုံးသမျှမီတာကိုလည်း သူ့ခမျာ ကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးသာသုံးသော်လည်း (တစ်ယူနစ် ၅ဝကျပ်)နှင့်မီတာဆောင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့ဆိုင်ကလေးမှာ......./
လုပ်ငန်းလုပ်လို့လုပ်ငန်းမီတာဖြစ်သည်မှာမှန်သော်လည်း အီးဘီစီရုံးမှဝန်ထမ်းများကိုပိုက်ဆံပေးပီးညှိထားပါက မီးစိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်ပီး အဲကွန်းဘယ်နှစ်လုံးပင်ဖွင့်စေကာမူ ရိုးရိုးမီတာဆောင်သလိုသာဆောင်ရကြောင်းသိရှိရပါသည်.ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်လုပ်စားတော့ ခွေးဟောင်..(အဲလေ ယောင်လို့ )လုပ်စားတော့မိုးမှောင်ဆိုသလိုဖြစ်နေရပါသည်.မြန်မာပြ ည်တွင် ကွမ်းယာရောင်းစားလျှင်ပင် မလွယ်နိုင်ပါ.မြန်မာပြည်ကြီးအရေး ကြာလေကြာလေရင်လေးစရာပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ တရားမျှတသော မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါစေ.
( ကျွန်တော့်အမြင်ကိုတင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ )
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/29/20090အကြံပြုခြင်း
The Arakan National Newspaper Nov_2009
The Arakan National Newspaper Vol
29 Nov ဒိုင်ယာရီ
ခွဲစိတ်ပေးသည့်ဆရာဝန်မှာ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဦးကြည်စိုးဖြစ်ပြီးရွှေ့ဂုံတိုင်ရှိ S S C အထူးကုဆေးခန်း၏ ရှယ်ယာဝင်တဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။.
အတွဲ၂၊ အမှတ်(၆၁)၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂ဝဝ၉။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကိုယ်တိုင်ရေးဘ၀ ဇာတ်ကြောင်း
Article of Aung San
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/28/20090အကြံပြုခြင်း